NCA Youdza Hurumende Kuti Ipe Vanhu Mwedzi Miviri Yekuzeya Bumbiro Idzva
HARARE — Sangano rinorwira kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo yenyika rinobva muvanhu, reNational Constitutional Assembly, NCA, rinoti hurumende yemubatanidzwa inofanirwa kupa zvizvarwa zveZimbabwe mwedzi miviri yekuti zviwongorore gwaro rebumbiro remitemo rakanyorwa richitungamirwa nekomiti yeparamende, yeCOPAC, pasati paendwa kureferendamu.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda wesangano ravo muHarare neChipiri, sachigaro veNCA, Va Lovemore Madhuku, vati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kupihwa mukana wekuti zvizeye zviri mugwaro rebumbiro idzva remitemo yenyika pasati paitwa referendamu vachiti nguva iri kutaurwa nevamwe vari muhurumende kuti referendamu inogona kuitwa mwedzi unouya kana muna Kubvumbi, ishoma zvikuru.
NCA inotiwo hurumende inosungirwa kuisa gwaro iri mundimi dzakasiyana siyana dzinotaurwa munyika kuitira kuti veruzhinji vanzwisise zviri mugwaro rebumbiro iri.
VaMadhuku vati mutemo wePublic Order and Security Act unofanirwa kusendekwa parutivi kuitira kuti vanhu vadzidziswe nezvegwaro rebumbiro iri vakasununguka.
VaMadhuku, avo vanova zvakare muzvinafundo munyaya dzebumbiro remitemo pa University of Zimbabwe, vati vachaenda kumatare edzimhosva kana zvizvarwa zveZimbabwe zvisina kupihwa mwedzi miviri yekuti zviwongorore zviri mugwaro rebumbiro iri.
Vati sangano ravo riri kuda kuti veruzhinji varambe bumbiro rakanyorwa richitungamirwa neCOPAC vachiti bumbiro iri harina kunyorwa nenzira kwayo uye rinopa masimba akawandisa kumutungamiri wenyika.
VaMadhuku vati sangano ravo richashanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevadzidzi kuti bumbiro iri rirambwe neveruzhinji.
VaMadhuku vati sezvo sangano ravo risina mari yekuita misangano mikuru neveruzhinji, vachapinda mudzimba dzevanhu vachivakurudzira kuti varambe bumbiro iri.
Kubva pakatanga kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika neCOPAC makore mana apfuura, NCA yakagara yataura kuti haisi kuzotsigira bumbiro iri ichigunun’una kuti mapato ezvematongerwo enyika haafanirwe kunge achitungamira chirongwa ichi.
Mapato ese ari muhurumende yemubatanidzwa anoti achatsigira gwaro rebumbiro idzva iri pachaitwa referendamu.
Muna 2000 sangano iri, richitsigirwa neMDC, rakakurudzira veruzhinji kuti varambe gwaro rebumbiro idzva rakanga ranyorwa rikazopedzisira rarasa zvakanga zvabva muvanhu, izvo zvakaita kuti risatambirwe pareferendamu yekutanga kubva Zimbabwe yatanga kuzvitonga muna 1980.